Vaovao - Fampiharana ny vovo-dranon'elanelana azo haverina
Ny vovony redispersible dia vovony namboarina amin'ny famafazana polymer emulsion, antsoina koa hoe vinaingitra kapaoty. Ity vovoka ity dia azo ahena haingana ho emulion aorian'ny fifandraisany amin'ny rano, ary mitazona ireo fananana mitovy amin'ilay emulsion tany am-boalohany, izany hoe, hisy ny horonantsary aorian'ny fivoahan'ny rano. Ity sarimihetsika ity dia manana haingam-pandeha avo, fanoherana ny toetr'andro ary fanoherana tsara ny sangan'asa maro samihafa. Fatorana avo.
Ny vovoka latina azo ovaina dia ampiasaina amin'ny sehatry ny fananganana toy ny insulation rindrina ivelany, fatorana taila, fitsaboana amin'ny endriny, gypsum mifamatotra, gypsum stucco, fananganana rindrina anatiny sy ivelany rindrina, fotaka haingon-trano, sns., Izay manana faritra malalaka sy tsena tsara. fanantenana.
Ny fampiroboroboana sy ny fampiharana ny vovoka latex azo zahana indray dia nanatsara be ny fahombiazan'ny fitaovam-pananganana nentim-paharazana, nanatsara be indrindra ny firaisan-kina, ny firaisan-kina, ny tanjaka flexural, ny fanoherana ny fiantraikany, ny fanoherana ny abrasion, ny faharetany, sns. Ataovy ny vokatra vita amin'ny fananganana miaraka amin'ny atiny avo lenta sy haitao avo lenta mba hiantohana ny kalitaon'ny tetik'asa fananganana.
Vovoka azo zahana indray
Ny vovo-polymer azo ampiasaina azo zahana eto amin'izao tontolo izao dia: Vinyl Acetate Polyvinyl Acetate (VAC / E), Terpolymer of Ethylene, Vinyl Chloride ary Vinyl Laurate (E / VC / VL), Estera Vinyl Acetate Ester ary ethylene ary asidra vine ester ternary copolymer vita amin'ny vovo-tany (VAC / E / VeoVa), ireto karazam-bazana polisim-bary azo zahana ireto indray no manjaka amin'ny tsena, indrindra fa vinyl acetate sy etilety copolymer vita amin'ny vovo-tany vita amin'ny vovo VAC / E, dia manana toerana mitana andraikitra eo amin'ny sehatra eran'izao tontolo izao, ary maneho ny toetra mampiavaka ny redispersible vovoka. Avy amin'ny traikefa ara-teknika amin'ny fametrahana polymers efa nasiam-panovana, mbola io ihany no vahaolana ara-teknika tsara indrindra:
1. Iray amin'ireo polim-bazaha malaza indrindra erak'izao tontolo izao;
2. Ny traikefa be indrindra amin'ny sehatry ny fananganana;
3. Afaka mahafeno ny fananana rheolojika takian'ny mortar (izany hoe, asa ilaina);
4. Ny resina polymerika miaraka amin'ireo monomer hafa dia manana ny mampiavaka ny zavatra mora miovaova (VOC) sy ny entona manaitaitra ambany;
5. Manana toetra mampiavaka ny fanoherana UV, tsara ny fanoherana ny hafanana ary maharitra maharitra;
6, miaraka amin'ny fanoherana ambony amin'ny saponification;
7, manana ny felam-panafody fitaterana fitaratra be indrindra (Tg);
8. Manana fatorana mifamatotra tsara sy malefaka ary milina;
9. Manana traikefa lava indrindra momba ny famokarana simika sy ny fomba hitazonana fitoniana maharitra amin'ny famokarana vokatra tsara kalitao;
10. Mora ny mampifangaro azy amin'ny asa colloid miaro (alkaola polyvinyl)
Ny sary 1 dia sarin'ny vovoka azo averina amidy eny an-tsena
Endrika ny redispersible vovony
1. Ny vovo-tany azo ovaina dia vovoka azo avela tsy azo esorina amin'ny rano. Izy io dia copolymer an'ny etilena sy vineto acetate, miaraka amin'ny alikaola polyvinyl ho colloid miaro.
2. Ny vovobony latinina redispersible vita amin'ny sarimihetsika dia manana fananana mihetsika amin'ny alàlan'ny sarimihetsika, ny vahaolana vita amin'ny rano 50% mamolavola, ary mamorona sarimihetsika toy ny plastika aorian'ny fametahana amin'ny vera mandritra ny 24 ora.
3. Ny sarimihetsika noforonina dia misy tsy fitoviana sy fanoherana rano. Afaka mahatratra ny fenitra nasionaly.
4. Ny vovony vita amin'ny latabatra vita amin'ny mari-pahaizana dia manana fampisehoana lehibe: manana fahaiza-manao fatorana avo lenta sy fampisehoana tokana, fanoherana ny rano tsy manam-paharoa, herinaratra tsara ary manome ny fanoherana ny alàlan'ny fako, izay afaka manatsara ny halavan'ny rihitra sy ny tanjaka marefo ankoatra ny plastika. ary asa miasa, izy dia manana fahalefahana mahery vaika amin'ny fako-miolakolaka amin'ny famoretana.
Fampiharana ny vovoka latabatra azo zahana ao anaty aretin'ny vovoka maina:
◆ Metaer mortar Ary ireo olana kalitao hafa.
Material Ny feta sy ny fanoratana tena: Ny vovobony latinina miverina dia manana tanjaka avo, cohesion tsara, adhesion ary ilaina fanamorana. Afaka manatsara ny adhesion, ny fanoherana ny abrasion ary ny fitazonana ny rano amin'ireo fitaovana. Izy io dia afaka mitondra rheolojika, mahay miasa ary fampandehanana tsara indrindra amin'ny fanaovana fako sy fandrefesana ny gorodona.
◆ Tile fantsom-bolo, vovon-goavambe mifangaro: Ny vovobony vita amin'ny alàlan'ny vovoka miloko maintso dia manana adhesion tsara, fihazonana rano tsara, fotoana malalaka misokatra, fanakorontanana, fanoherana sag a ary fanoherana tsara ny setroka tsara. Afaka mitondra haingam-pandeha ambony, fanoherana avo ary tsara fikojakojana ny fananganana hametahana pataloha, fametaka tsipika manify sy fisaka miaraka.
◆ Rindran'ny rano: Ny vinaingitra vita mena dia manatsara ny tanjaky ny fifamatorana amin'ny sangan'asa rehetra, mampihena ny modulus elastika, mampitombo ny fihazonana rano, mampihena ny fidiran'ny rano ary manome vokatra avo lenta, fanoherana ny toetr'andro ary fepetra takiana ny fanoherana ny rano. Izy io dia manana ny vokany maharitra amin'ny rafitra famehezana miaraka amin'ny fepetra takian'ny famoahana rano sy ny fanoherana ny rano.
◆ Fototra famonoana rindrina ivelany: Ny vovoka emulion azo averina ao anaty rafi-pandrefesana ivelany ivelan'ny rindrina dia manatsara ny fifangaroan'ny feta sy ny fatorana amin'ny birao insulasi, mba ahafahanao mikaroka insulation nefa mampihena ny fanjifana angovo. Mba hahatratrarana ny fahaiza-miasa ilaina, ny tanjaka sy ny malefaka amin'ny vokatra azo avy amin'ny rindrina insulation amin'ny rindrina ivelany, azonao atao ny manao ny vokatra mortar-nao manana fampisehoana miraikitra tsara miaraka amina andian-insulation material sy ny base. Mandritra izany fotoana izany dia manampy amin'ny fanatsarana ny fanoherana ny fiatraikany sy ny fanoherana ny triatra ambonin'ny tany izany.
◆ Fanamboarana ny vongan-drano: ny vovoka latina azo ovaina dia manana ny fahafaha-mandanjalanja, ny fihenan-tsofina, ny firaiketam-po avo, ny tanjaka azo ampiasaina ary ny hery mihodina. Ataovy mifanaraka amin'ny fepetra takiana etsy ambony ny fanamboarana mortar fanamboarana ny simenitra tsy miorina amin'ny rafitra.
◆ Antanan-tsaratsara: vovony vita amin'ny latabatra vita amin'ny mazoto dia ampiasaina indrindra amin'ny fikarakarana ny mombamomba ny moka, ny beton-tsindry azo tsapain-tanana, ny lava-by ny fasika ary ny fofona vovoka, sns., Mba hamahana ny olana izay tsy mora mifikitra noho ny fampidiran-drano be loatra na ny fahatsarana. , ary ny takelaka plaster dia foana. Amponga, vaky, peeling sns ... Mahatonga ny adhesion hatanjaka kokoa, tsy mora hianjera sy mahatohitra ny rano ary mahatohitra tsara ny hatsiaka. Misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fampandehanana tsotra, fananganana mora.
Ny vovony redispersible dia ampiasaina indrindra amin'ny:
Vovoka putty rindrina anatiny sy ivelany, fametahana taila, mpiambina taila, mpiorina vovoka maina, rindrina fanamafisana rindrina ivelany, fotaka manamboatra tena, fanamboarana fotaka, fotaka haingon-trano, fotaka tsy tantera-drano amin'ny lafaoro maina mifangaro maina. Ny rihitra rehetra dia ampiasaina hanatsarana ny fahamendrehana sy ny modulus avo lenta ho an'ny simenitra nentim-paharazana, ary hanomezana azy ireo fahafaha-manao tsara kokoa sy tanjaka fifamatorana mba hanoherana sy hanemorana ny famokarana vaky amin'ny simenitra simenitra. Satria ny polymer sy ny mortar dia mamorona rafitra tambajotram-pifandraisana mifangaro, dia misy horonantsary polymer mitohy miforona ao amin'ny pores, izay manamafy ny fifamatorana eo anelanelan'ny agregates sy manakana ny sasany amin'ny pores ao anaty mortar. Noho izany, ny rihitra nohavaozina aorian'ny fanamafisana dia manana fahombiazana tsara kokoa noho ny rihitra simenitra. Nisy fihatsarana lehibe.
Fotoana fandefasana: Mar-18-2018